लोभलाग्दो शिर्ष सिमकोट, तपाई जाने हैन त ? (सुन्दर तस्बीर सहित)
शनिवार, कार्तिक ६, २०७८ ११:३१:४७
शुक्रवार, आश्विन ५, २०७५ नवराज महतारा
असोज ५, सिमकोट । फोटो हेर्दा तपाईलाई कतै स्वीजरल्याण्ड हो की भन्ने लाग्न सक्छ । तर यो तस्बीरमा भएको ठाउँ तपाईले कल्पना गरेको स्वीजरल्याण्ड होइन् । यो त तपाईको मनमा जरा गाडेर राखिएको विकट, अभावको उपमा पाएको कर्णाली प्रदेशको हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हो ।
सिमकोटमा लगाइएको कालो काउनी । सिमकोटमा लगाइने यो बाली कर्णालीवासीको आप्mनो रैथाने बाली हो । यसको भात खाने गरिन्छ ।
झण्डै ३ हजार मिटरको दुरीमा रहेको सिमकोट अहिले जो काहीलाई लोभ्याउने खालको भोषभुषामा ठाँटिएको छ ।
भौगोलिक रुपमा निकै विकट र अभावको दर्जा पाएको हुम्लाको जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट अहिले निकै लोभलाग्दो भएको छ । हावापानी देखि कृषकले खेतबारीमा लागएका बालीनाली समेत पाकेर पहेँलो देखिएपछि यतिवेला जो कसैका लागि समेत हुम्ला निकै लोभलाग्दो छ ।
रानीवन क्षेत्रबाट देखिएको सिमकोट र पाकेर पहेलो भएको चिनो
कृषकले खेतबारीमा लगाएको चिनो, कागुनो, फापर, मार्से, सिमी, आलु देखि बारीमा लटरम्म फलेका स्याउँ पनि पाकेर खाउँखाउ लाग्ने भएपनि यति खेर हुम्ला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि निकै लोभ लाग्दो देखिएको हो ।
आफूमाथि सञ्चार माध्यम र केही क्षणीक पर्यटकका रुपमा आउने नेपालीले लेखेका आलेखले सँधै विकटताको बिम्ब पाएको हुम्लाको सिमकोट अहिले आफूमाथिको पहिचानलाई सुन्दर दृश्यले परिवर्तन गर्न चाहेको देखिन्छ ।
सिमकोटमा लगाइएको मार्से (लट्टे) यसको प्रयोगले विभिन्न रोगको उपचार हुनुका साथै धेरै शक्ती समेत प्रदान गर्ने स्थानीय विश्वाश छ ।
नेपालगञ्ज देखिको ४५ मिनेटको हवाई यात्रामा पुगिने सिमकोट छिमेकी मुलुक चिनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्ने बहूचर्चित धार्मिक तिर्थस्थल कैलास मानसरोवरका भारतिय तिर्थ यात्री र केही हुम्लाको भ्रमणमा आएका तेस्रो देशका पर्यटक देखि विभिन्न काम विषेशले हुम्लाको सिमकोट बिमान स्थलमा आउने बित्तिकै आफूसँग भएको क्यामरा र मोबाइलमा दृश्य कैद नगरी मनले मान्दैन् ।
सिमकोटमा लगाइएको फापर । सिमकोटको मुख्य बाली फापर स्वास्थ्यका लागि निर्क हितकर मानिन्छ ।
कसरी पुग्ने सिमकोट ?
भौगोलिक रुपमा निकै विकट मानिएपनि सिमकोट आवत जावतका लागि निक सहज ठाउँ हो । नेपालका सबै जिलला सदरमुकाम मध्ये उच्च स्थानमा रहेको सिमकोट पुग्ने हवाई एक मात्रै विकल्प हो । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा समाहति नभएको सिमकोटमा नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट हवाई यात्रा तय गरेर पुग्न सकिन्छ ।
सरकारी नेपाल वायू सेवा निगम, निजि विमान कम्पनीले सञ्चालन गरेका तारा, समिट, सिम्रीक, मकालु लगायतका आधा दर्जन बिमान कम्पनी मार्फत सिमकोट पुग्न सकिन्छ ।
सिमकोट आउने टिकटका लागि नेपालगञ्ज सिमकोट र सुर्खेत लगायत ट्राभल्स एजेन्सी देखि सम्बन्धि विमान कम्पनीमा समेत पाउन सकिन्छ । सिमकोट पुग्न नेपालगञ्ज देखि साढे ७ हजार र सुखेएत देखि सात हजार देखि ९ हजारसम्म हवाई भाडा तिरे सिमकोट पुग्न सकिन्छ ।
तल्लो बजार देखि देखिएको सिमकोट बजार
सिमकोटमा बसाईको व्यवस्था कस्तो छ ?
सिमकोट पुगेपछि तपाईलाई सिमकोटको बसाई कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता समेत लाग्न सक्छ तर त्यो चिन्ता मान्नु पर्दैन । सिमकोटमा अहिले निकै व्यवस्थित र राम्रा होटेलको संख्या दिनानु दिन बढ्दैछन् । अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई बस्ने एक दर्जन भन्दा बढी राम्रा होटेल छन्, सिमकोटमा ।
सिमकोट विमानस्थलमा भएको तारा यएरको विमान झण्ड्याएर लिदै गरेको हेलिकप्टर
सिमकोट हुँदै कैलास मानसरोवर जाने भारतिय पर्यटकको संख्या मात्रै दश देखि १२ हजारको अनुपातमा आउने भएपछि सिमकोटमा करोडौको लगानीमा अहिले सनभ्याली रिसोर्ट, मानसरोवर होटेल, बिजय होटेल, सिमकोट इन, गेट वे, कैलास होटेल जस्ता एक दर्जन ठूला होटेल छन् भने थुप्रै साना होटेल छन् ।
यदि तपाई सिमकोट आउनु भयो भने तपाई आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुशारका होटेलको बसाई गरेर आनन्द लिन सक्नु हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, आश्विन ५, २०७५, ०८:०९:००